विश्वकपमा बंगाली 'टाइगर्स'को छाप - Khelpati
विश्वकपमा बंगाली 'टाइगर्स'को छाप
शुक्रवार, असार २७, २०७६ विश्वास थापा
काठमाडौँ । क्रिकेट खेलको चरित्रनै गज्जबको हुने । एक्लो बलमा केही नलाग्ने । खेल जित्न पुरै टिमको उत्तिकै मेहनत चाहिने । उस्तै दम र जोश चाहिने ।
एक्लैले खेलको नक्सा बदल्न मिल्ने भए सायद बंगलादेशले विश्वकपमा कोर्ने चित्र र तय गर्ने बाटो पक्कै फरक हुने थियो ।
इंग्ल्याण्डमा जारी १२ औं संस्करणको आईसीसी विश्वकपनै हेरौ न ।
बंगलादेशले विश्वकपमा सेमिफाईनलको यात्रा समेत तय गर्न सकेन । बंगलादेश भने ९ खेलबाट ७ अंक मात्र जोड्दै सातौं स्थानमा रह्यो ।
तर, समग्रमा बंगलादेशको प्रदर्शन विश्वकपमा उत्कृष्ट रह्यो । जारी विश्वकपमा बंगलादेश मात्र एक राष्ट्र हो, जसले ३ सय भन्दा माथिल्लो लक्ष्य पुरा गर्यो । वेष्ट इण्डिजबिरुद्द ३ सय २२ रन फराकिलो लक्ष्य मात्र ४१ ओभर १ बलमा ३ विकेट गुमाएर उसले पुरा गरेको थियो ।
खेलका हिरो थिए, शकिब अल हसन ।
शकिब उनै खेलाडी थिए, जो विश्वकप अघि आईसीसी एक दिवसीय बरियताको अलराउण्डरतर्फ शीर्ष स्थानमा छन् । म्यान अफ द म्याच बनेका उनले सो खेलमा ९९ बलमा १६ चौका प्रहार गर्दै १ सय २४ रनको अविजित शकतीय इनिङ्स खेलेका थिए ।
३२ बर्षे शकिबको एक दिवसीय विश्वकप यात्रा लगभग सकिएको छ । करिब अन्तिम विश्वकप खेल्दै गरेका उनले प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । शकिबले विश्वकपका केही रेकर्ड समेत आफ्नो नाममा दर्ता गराए ।
बंगलादेशका मुख्य खेलाडी रहेका शकिबले लिगका सबै खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपनि आफ्नो राष्ट्रलाई सेमिफाइनल सम्म पु¥याउन सकेनन् । उनले ८ खेलमा २ शतक र ५ अर्धशतक प्रहार गरेका थिए । उनी मात्र एक खेलमा अर्धशतकबाट ९ रनले चुकेका थिए । प्रतियोगिताभर उनले ११ विकेट समेत हात पारेका छन् । प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको सुचिमा समेत शकिब पाँच भित्र अटाएका छन् ।
शकिबले ८ खेलमा ८६ दशमलब ५७ को औसतमा ६ सय ६ रन प्रहार गरे ।
सेमिफाइनल नपुग्दा पनि शकिबले एकै विश्वकप सर्वाधिक रन बनाउने पाँचौ खेलाडी बनेका छन् । उनी भन्दा अघि भारतका सचिन तेन्दुलकरले सन् २००३ मा ६ सय ७३ र अस्ट्रेलियाका म्याथु हेडेनले सन् २००७ मा ६ सय ५९ रन बनाएका थिए । त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रोहितले सन् २०१९ को विश्वकपमा ६ सय ४८ रन र चौथो नम्बरमा अष्ट्रेलियाको डेबिड वार्नरले ६ सय ४७ रन बनाएका छन् ।
शकिब विश्वकपमा ६ सय रन पुरा गर्ने पहिलो तथा एकल नन ओपनिङ ब्याट्सम्यान बनेका छन् । हालसम्म शाकिब बाहेक बंगलादेशका कुनै पनि खेलाडीले विश्वकपमा हजार रन पुरा गर्न सकेका छैनन् । यस्तो उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीको टिम सेमिफाइनलमा नपुग्नु समर्थक मात्र नभएर स्वयम शकिबका लागि समेत ठुलो अन्याय हो ।
कहाँ चुक्यो त बंगलादेश ?
क्रिकेटमा खेलको नतिजालाई धेरै कुराले प्रभावित बनाउछ । खेलाडी जति सुकै लयमा होस, साना गल्तीले खेलको नतिजानै फरक पारिदिन्छ ।
यसपटकको विश्वकपमा बंगलादेशको कमजोरी बलिङमा देखियो ।
एसियाको देशलाई इंग्ल्याण्डको पिचमा कमै सहयोग मिल्ने गर्छ । प्रतियोगिताका अन्तिम २ खेलमा ५ विकेट हात पारेका मुस्ताफिजुर रहमानले समग्रमा २० विकेट हात पारे । उनी प्रतियोगितामा सर्वाधिक विकेट लिने अस्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्क भन्दा पछाडी रहे ।
अन्य खेलाडीले प्रतियोगितामा उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गर्न सकेनन् । सायद एसिया बाहेक प्रतियोगिता भएकाले बंगलादेशी बलरलाई समस्या पर्न गयो ।
विश्वकप एसियाली राष्ट्रमा भएको भए ?
सायद बंगलादेश सेमिफाइनल पुग्न सक्थ्यो, उसले प्रर्दशनले हामी कल्पना चाही गर्न सक्छौ ।
महाकाली र छपारी सुपर आठमा
जसले फेरिदिए नेपाली क्रिकेटको नक्सा
उपाधि जित्ने पाँच कप्तानको दाबी
इमान्दारीपूर्वक कप्तानको जिम्मेवारी पुरा गरे - पारस
डब्लुसीएलको उपाधि ट्रफी सार्वजनिक
पारस लिजेण्ड कप्तान - सन्दीप